Amaqonga akho okuThengisa aNgachanekanga njengokuba ucinga | Martech Zone
Abantu abaninzi abakuqondi ukusikelwa umda kwe- kubahlalutyi kunye namaqonga entengiso ekulinganiseni unique iindwendwe. Uninzi lwamaqonga alinganisa undwendwe ngokubeka i Cookie, ifayile encinci ebhekiswa kuyo ngalo lonke ixesha undwendwe lubuyela kule ndawo lisebenzisa isikhangeli esinye. Ingxaki kukuba andinakuphinda ndindwendwele indawo yakho kwisikhangeli esinye… okanye ndingazicima ii-cookies zam.
Ukuba ndindwendwela indawo yakho kwifowuni yam ephathekayo, ithebhulethi, ilaptop kunye ne-desktop… ndiye ndaba ziindwendwe ezi-4 ezizodwa. Ukuba ndicoca ii-cookies zam amatyeli aliqela ndaza ndabuya ndabuya ndabuya ndaya kwindawo yakho, ndiye ndaye ndangakumbi nangakumbi. IMediaMind isebenzisa ubuchule obubizwa ngokuba lundwendwe olukhethekileyo oluhlengahlengisiweyo kwaye bayayichaza kule vidiyo- basebenzise uhlengahlengiso lobunini kubalo lwabaphulaphuli bakho. Bacacisa ingxelo engaphezulu kweendwendwe ezizodwa apha:
Ingxaki ayikho nje ngeyakho kubahlalutyi, nangona. Ichaphazela kakhulu amaqonga entengiso akwi-Intanethi alandelela indlela yokuziphatha kwabatyeleli kunye neenkcukacha zabantu ekuhambeni kwexesha. comScore uxela ukususwa kwecookie njengomba omkhulu kakhulu. Ukusuka kwi-comScore, ekujoliseni ngokuchanekileyo usebenzisa iicookies (% yeempawu ezihanjiswe ngokuchanekileyo):
I-70% yedemo enye (umzekelo, abasetyhini)
I-48% yeedemo ezimbini (umzekelo, abasetyhini abaneminyaka eyi-2-18)
I-11% yeedemo ezi-3 (umzekelo, abasetyhini abaneminyaka eli-18-34 abanabantwana)
I-36% yokujolisa ekuziphatheni
Oku akuthethi ukuba ujonge igama lakho kubahlalutyi okanye iqonga lakho lokuzenzekelayo lokuthengisa. Kuphela lilizwi lesilumkiso ekuxhomekekeni kwakho kwiindlela zokunika ingxelo ezinje. Kubathengisi, kulapho amaqonga angena kunye nomntu wokungena kunye nokuhlanganiswa anokujolisa ngokuchanekileyo kubakhenkethi bakho kwiisamu nakwiiseshoni. Ukuba ufuna umtyeleli wakho angene kwiwebhu, kwi-app yakho yeselfowuni, okanye naluphi na ujongano- ungazijolisa ngcono ezo ndwendwe kwaye usombulule ngokuchanekileyo inani lokwenyani unique iindwendwe.
Ulwazi oluhamba phambili lubaluleke ngakumbi njengoko usebenzisa ezi metric. Umda wempazamo kuma-mediums awuyi kutshintsha kakhulu-ke ngokuhamba kwexesha ukuba ubalo lwakho lwendwendwe olukhethekileyo luhamba phezulu, emva koko wenza into elungileyo. Ukuba abekho, mhlawumbi unawo umsebenzi ekufuneka wenziwe.
tags: uhlengahlengiso undwendwe olwahlukileyoumdlaloingqondoIindwendwe ezizodwaukulandelwa kweendwendweiindwendwe
Okt 23, 2013 ngexesha 9:49 AM
Enkosi ngokwabelana noDoug! Kufundeka okuhle ngokwenene kwaye kundenze ndacinga! ..
Jan 4, 2014 kwi-5: 19 AM
nyfv Kutshanje bendingenwe yimali kwaye iidebhithi bezinditya macala onke. oko kwade ndafunda ukwenza imali.. kwi-INTERNET. Ndindwendwele i-surveymoneymaker point net, ndaza ndaqalisa ukugcwalisa uphando ngekheshi, kwaye ngenene, ndiye ndakwazi kakhulu ukuhambahamba ngokwezimali!! ndiyavuya kuba ndiyenzile le nto.. mKBu